ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေပါဖို့ကိုဘယ်လို - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတ္တုသိုလှောင်ပစ္စည်းသတ္တုကွန်တိန်နာ,ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း,Pallet,ထိန်သိမ်း,roll ကွန်တိန်နာ etc
နေအိမ် » ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေပါဖို့ကိုဘယ်လို
ကုန်ပစ္စည်းများကိုတံဆိပ်ကပ်ပါ, စနစ်တကျထုံးစံ၌သူတို့ကိုအမိန့်, နှင့်ခေါင်းစဉ်ကိုအစားထိုးလိုက်ပါ, အတိအကျစကားနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်, သင်္ကေတများသို့မဟုတ်နံပါတ်များ. ကုန်ပစ္စည်းများ၏သိပ္ပံနည်းကျ coding, အရာတိကျထုတ်ကုန် coding နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, လျင်မြန်စွာသိုလှောင်ခြင်းနှင့်အလုပ်ပါဝါနိုင်ပါတယ်. ဂိုဒေါင်စနစ်တကျစေရန်အလို့ငှာ, သောဂိုဒေါင်၏အလုပ်လုပ်စံချိန်စံညွှန်းများအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်, ကုန်ပစ္စည်း၏သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအရသိုလှောင်မှုနေရာအားနေရာအတော်များများသို့ခွဲခြားထားသင့်သည်, ကုန်တင်အာကာသဖွဲ့စည်း, နှင့်နံပါတ်, တကုန်ပစ္စည်းများ၏ခြားနားချက်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဖြစ်ပါသည်, ဒုတိယတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အလုပ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်ထိရောက်စွာခွဲခြင်းအလုပ်အတွက်အဆင်ပြေစေသည်.
(2) အဆင့်များစွာကိုရေတွက်ခြင်း, စာရင်း၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်
ကန ဦး တွင်ပါဝင်ဝန်ထမ်း, ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူး, ပုံဆွဲ, နှင့်ကြီးကြပ်မှုစာရင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီလေ့ကျင့်သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်, ထို့ကြောင့်စာရင်းအင်း ၀ န်ထမ်းသည်စာရင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရန်လိုသည်, စာရင်းနည်းလမ်းများ, နှင့်စာရင်းများအတွက်အသုံးပြုပုံစံများ; ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်းအတွက်ဝန်ထမ်းများသည်ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ခြင်းသင်တန်းကိုပြုလုပ်သည်. အကြောင်းမှာပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်သူများသည်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အများအားဖြင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၏လယ်ပြင်ကြိမ်နှုန်းအသိပညာလေ့ကျင့်ရေးအားကောင်းလာသင့်သည်, အရာစာရင်းအလုပ်၏ချောမွေ့တိုးတက်မှုအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်.
(3) စစ်ဆင်ရေးပြီးစီးခဲ့သည်, နှင့်သိုလှောင်မှု၏အလုပ်လုပ်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်လာသည်.
ကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်မှုထဲသို့မထည့်မီအလုပ်အားလုံးလုံလောက်ကြောင်းသေချာပါစေ, သိုလှောင်မှုစင်ပေါ်ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစံတရားဝင်သည်, ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံမှုအကြောင်းအရာသည်ပြည့်စုံသည်, နည်းလမ်းသင့်လျော်သည်, စာရွက်စာတမ်းများမှန်ကန်သောစံချိန်စံညွှန်းအတွက်ဖြည့်နေကြသည်, အလုပ်သမားများ၏ဌာနခွဲရှင်းပါတယ်, ဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ကောင်းမွန်သည်, နှင့်သိုလှောင်မှုလက်ခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါပုံမှန်မဟုတ်သောပြproblemနာကိုစနစ်တကျကိုင်တွယ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောမပြည့်စုံစာရွက်စာတမ်းများအဖြစ်, ကိုက်ညီမှုမရှိသောစာရွက်စာတမ်းများ, ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေး, ကိုက်ညီမှုပမာဏ, တစ်ခုတည်းကုန်ပစ္စည်းများ, နှင့်မှားယွင်းစစ်ဆေးခြင်း. ထို့ကြောင့်, ဂရုတစိုက်အဖွဲ့အစည်း, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအစီအစဉ်များ, ကုန်ပစ္စည်းများကိုဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးပြည့်မီအောင်ပို့ဆောင်ရန်သေချာစေရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစရိတ်ဖြင့်တတ်နိုင်သမျှဝေးကွာပါသည်, အရေအတွက်, အချိန်မီနှင့်လုံခြုံ, အကျိုးရှိစွာသေချာစေရန်, တိကျ, တန်ဖိုးနည်း, စနစ်တကျအလုပ်.
(4) သိုလှောင်အလုပ်၏ informatization, သိုလှောင်မှု၏လုပ်ငန်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးရှုထောင့်၌မြို့တော်တိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်သိုလှောင်၌တည်၏, သိုလှောင်ရာနေရာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးရန်လိုအပ်သည်, သိုလှောင်ရုံ, ပစ္စည်းကိရိယာများကိုကိုင်တွယ်, ပစ္စည်းကိရိယာများ sorting, နှင့်ဘားကုဒ်ကျွမ်းကျင်မှု. ဘားကုဒ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စီးပွားရေး၏အားနည်းချက်ကိုထိရောက်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်, စာရင်းထိန်းချုပ်မှု၏အခက်အခဲ, ကုန်ပစ္စည်းများကိုင်တွယ်ရန်အခက်အခဲ, နှင့်ကုန်တိုက်၏ခန့်မှန်းရခက်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှစွမ်းရည်. သိုလှောင်မှု၏သတင်းအချက်အလက်ဖြည့်စွက်ရန်, အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက်သီးခြားကုဒ်တစ်ခုတည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည်, နှင့်အဝတ်အစား၏အပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန် tag ကိုအပေါ်ချိတ်ဆွဲဘားကုဒ်တံဆိပ်ကပ်စေရန်ဘားကုဒ်ပရင်တာကိုသုံးပါ. ဒီဟာကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထပ်ရှာလို့မရတော့ဘူး, ရောင်းချမှု၏အချိန်ကိုက်လက်လွတ်.
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်. ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဥစ္စာဓနများ. ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည် Stack ထိန်သိမ်း,သံသိုလှောင်ကိတ်, သိုလှောင်မှု Box ကို Bins.ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.